२०७६ चैत्र १८ गते , मंगलवार प्रकाशित
सिभिल सर्भिस हस्पिटल, काठमाडौ।
मलाई राम्रो थाहा छ, कोभिड–१९को कारण विश्वमा मानव जाति माथि ठूलो विपत आइपरेको छ। यसको सामना गर्न विश्वका माहाशक्ति राष्ट्रहरुलाई चुनौती बनेको छ। आणविक शस्त्र–अस्त्र निर्माणको लागि बनाइएका भट्टीहरु यस युद्धमा निष्काम भएका छन्। यो महामारीको त्रासबाट भयभित भई सो भाइरसको सामना गर्न म स्वयम तिमी बाहेकका परिवारका सदस्यहरुलाई लिएर होम क्वारेन्टाइनमा बसी, महाभारतको यूद्धमा धृतराष्टले दरवार भित्र बसेर संजयको माध्यमबाट नरसंहार हेरेझै म पनि टुलु टुलु कोभिड–१९को कारण विश्वमा भएको नरसंहार हेरी बस्न विवश छु।
आज बाट सरकारले यसै महामारीको सामना गर्न होम क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई जेल र नगद जरिवानाको समेत घोषणा गरी लक डाउन जारी गरेको छ। सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले विवादकै घेरामा भए पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पि.पि.ई) खरिद गरी ल्याईसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उकास्न २५ लाखको बिमाको घोषणा गरी तिमीहरुलाई ललिपप पनि देखाएकोे छ। त्यो रकम यदि तिमी जीबित रहे तिमीले पाउने छैनौ। तिमी मरेर पाउने रकम मलाई चाहिएको छैन। तिमीलाई जन्माउने मातृभुमी नेपाल हो। नेपाल नभएको भए तिमी नेपाली हुन पाउने थिएनौ। तिमी भित्र सलवलाएको रगत नेपाल आमाको रगत हो। तिम्रो शरीरमा एक मुठ्ठी रगत र प्राण रहेसम्म नेपाल र नेपालीको सेवा गर्नु तिम्रो परंम कर्तव्य हुनेछ।
नेपालमा हरेक १० हजार जनसंख्या बरावर एक स्वास्थकर्मी पर्ने रेकर्ड स्वास्थ्य मंत्रालयले नै निकालेको कुरा तिमीलाई विदितै छ। तिमी डाक्टर भएको कारणले १० हजार नेपालीको स्वास्थको रेखदेख गर्नु तिम्रो पनि जिम्वेवारी हो। तिमी बाचेर १० हजार नेपाली मरेको मेरो लागि सैह्य हुने छैन। मैले चीन लगायत विश्वमा कोरोना भाइरसबाट पीडित रोगीहरुको सेवामा संलग्न रहदा स्वयम् आफैलाई रोग संक्रमण भई डाक्टरहरु मरिरहेका घटना र दृश्यहरु मैले संचार माध्यमहरुबाट देखिरहेको छु । एक डाक्टर मर्नु भनेको १० हजार नेपाली मर्नु हो भन्ने नेपालको स्वास्थ क्षेत्रको आँकडालाई हेर्दा पुष्टि हुन्छ ।
यो तिमीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चुनौति र अवसर पनि हो । संकटको बेला देश र जनताको सेवा गरी मातृभूमि प्रतिको ऋण चुक्ता गर्ने शुभ अवसर पनि हो, जसले तिमीलाइ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल जस्तो महान स्वास्थ्यकर्मी बन्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्नेछ। चुनौति त तिम्रो सामु तिमी रहने वा नरहने पनि हुनसक्छ । स्वस्थ्यकर्मीहरुको प्रथम कार्य आफू सुरक्षित रही सेवारत स्थानमा पीडितहरुलाई सेवा गर्नु हो। आफू बाँचे मात्र सेवा वा उद्दार गर्न सकिन्छ, यसतर्फ तिमीहरुको रक्षाको लागि सुरक्षा कवचको रुपमा नेपाल सरकारले पि.पि.ई लगायतको उपकरणको व्यवस्था गर्ने नै छ । यस्ता विनाशकारी महामारीहरुले विश्वमा सन १३४७–१३५१ मा व्ल्याक डेथको नामबाट २० करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो । सन् १५२० देखि बिफरको कारण ५ करोड ६० लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। सन् १८१७–१८२३ मा हैजाले १० लाख भन्दा बढि मानिसको मृत्यु भएको थियो। सन् १९१८–१९१९ मा इस्पेनिस फ्लु बाट ४० करोड र हाल सन् २०२० मा कोभिड–१९ को कारण आज सम्ममा ३३२५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। (भिजुवल क्यापिटलिस्ट २०२०) विश्वमा यस्ता महामारीहरुको सामना तिमीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुले पटक पटक गरी बिजय प्राप्त गरिसकेको इतिहास छ। यस्ता महामारीहरु माथि बिजय प्राप्त गर्नु तिमीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि गौरवगाथा हो ।
म यसबेला त्यो इतिहास सम्झिरहेको छु जुनबेला कोरीयाका महान नेता किम इल सङ कोरियाली स्वतन्त्रताको युद्धमा लडिरहदा चिनीया क्रान्तिका महान नेता माओत्सेतुङले उक्त स्वतन्त्रताको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना छोरा माओ इनको नेतृत्वमा सैनिक सहयोग पठाएका थिए। माओलाई राम्रोसगँ थाहा थियो युद्धमा कि त मारिन्छ कि त मरिन्छ । उनका छोरा माओ इनले त्यही युद्धमा बीरगति प्राप्त गरे। के माओलाई छोराको माया थिएन र? हो, यसबेला म त्यही पाठ पढिरहेको छु। देशमाथि आई परेको यो विकराल महामारीमा तिमी र तिमीजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु चाहे सेवारत रहेका हुन् वा घर बसिरहेका हुन उनीहरुको पहिलो पेसागत धर्म रोगीहरुको उपचार र सेवा गर्नु नै हो । राजधानीजस्तो सुविधायुक्त स्थानमा बसेर मात्र हैन देशको दुर्गम स्थानहरुमा सरकारले तिमीहरुलाई पुग्नसक्ने वातावरण बनाएर कोरोना विरुद्धको युद्धमा लडी विजय प्राप्त गर्नु पर्नेछ । बाचे फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल, जाँ हेनरी डुना र मदर टेरेसा जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व प्रसिद्ध नक्षत्र बन्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने छाै । विश्वस्त छु यो युद्धमा तिम्रो बिजय सुनिश्चित छ ।
हाम्रो चिन्ता नलिनु, कोरनाबाट संक्रमितहरुको सेवाको अग्रदस्तामा तिम्रो नाम सुन्न र देख्न पाउँ ,तबमात्र तिम्रो जन्मले सार्थकता र मेरो आत्माले शान्ति पउने छ। युद्ध पछिकाे विजय उत्सवमा भेटाैला !
तिम्रो माया गर्ने पिता,
जर्बुट्टा कला संग्रहालय, सिन्धुली